Apple AirPods na-aga n'ihu belata oge mbupu echere | Akụkọ akụrụngwa
Ọ bụrụ n ’ichere oge tupu ị nweta AirPods mana ị chọghị ichere izu isii nke mbupu echere nke Apple nyere anyị site n’ụbọchị ọ malitere ya, ọ ga-abụ na ọ bụrụ izu ole na ole, nke Apple belata oge mbufe na izu anọ, ị kpebiri ịtụ ha. Mana o yiri ka Apple emesịa pịa igodo ya nwee ike ịnọgide na-ebelata oge mbupu e mere atụmatụKemgbe izu abụọ ka ha belatara oge mbufe ruo izu anọ, ụmụ okorobịa si Cupertino eweghachila oge a na izu 2-3. Apple ewerela ọnwa 8 iji belata oge mbupu, ihe na-enye ọtụtụ ihe iji chee echiche.
Mbelata oge a na-aga n'ihu na mbupu oge dabara na mmụba nke ndị na-ere ahịa na-enye ngwaọrụ a, ngwaọrụ nke enwere ike ịchọta na Apple Store Online yana oge mbupu izu isii. Nwere ike belata na mbupu oge kwekọrọ na mbelata nke ọchịchọ maka ekweisi ikuku ndị a. Apple nwekwara ike na-eme atụmatụ na-eme na ngwaọrụ na-esote isi na-achọ okporo mmiri niile dị na ngwaahịa.
Ma ọ bụ ma eleghị anya, Apple emesịa dozie nsogbu nrụpụta nke ngwaọrụ a nyere kemgbe mmalite ya, nsogbu ndị Tim Cook na-ekwukarị na ha na-anwa idozi ozugbo enwere ike nwee ike igboju nnukwu ọchịchọ m nwere maka ngwaahịa a. Ihe doro anya bụ na anyị amaghị na ọ bụ ihe kpatara mbelata a, ebe Apple anaghị enyekarị nkọwa a. Ọ bụrụ na Apple ewebata AirPod ọhụrụ na Septemba, anyị ga-ewepụ obi abụọ ngwa ngwa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Apple AirPods na-ebelata oge mbubata echere
Anyị na-egosi gị ihe nkiri mbụ maka Age nke Alaeze Ukwu IV